मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.साह नियुक्त | मेरो सरकार
Home Breaking News मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.साह नियुक्त
धनुषा — प्रदेश २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साहलाई नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिमा डा.साह, रजिष्ट्रारमा डा. विनोद यादव र रेक्टरमा डा.अंकुर साहलाई नियुक्त गरिएको छ ।
जनकपुर प्रदेशिक अस्पतालाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने प्रदेश सरकारले बनाउने निर्णग गरेको छ । आइतबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका तीनै जनालाई पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै कार्याकाल सफलताको शुभकामना दिए ।
प्रतिष्ठान मधेसको गौरवको योजना अन्तर्गत गठन गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘प्रतिष्ठानमा योग्य र सक्ष्म पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘शून्यदेखि काम गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले यसै वर्षदेखि ऐकेडेमी सञ्चालन गर्नेछन ।’ प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई अवसरसँगै चुनौती पनि रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारको प्रतिष्ठा बचाएर अगाडी बढ्ने बताए । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले जनकपुरलाई स्तरीय स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र बनाउन प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताए ।
उपकुलपतिमा नियुक्त भएका डा. साहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पिछडिएको प्रदेश २ को स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न प्रतिष्ठानले पहिलो प्रयास गर्ने बताए । प्रतिष्ठानले दक्ष जनशक्ति मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी जनकपुरलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र बनाउने उनले बताए ।
उपकुलपतिमा नियक्त डा.साह वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ हु्न् । रेक्टरमा नियुक्त साह रेडियोलोजिस्ट हुने भने रजिष्ट्रारमा नियुक्त डा.यादव शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जको परीक्षा प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ ।
Previous articleजलेर ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु
Next articleपशुपतिनाथमा एक अर्बको सुनको जलप लगाइने